हिमाल खबरपत्रिका | एस्बेस्टस्को जोखिम: विषको ओत
एस्बेस्टस्को जोखिम: विषको ओत
- रामु सापकोटा, वीरगञ्जमा
मध्य तराईका हजारौं सर्वसाधारण प्रतिवन्धित एस्बेस्टस्युक्त छानामुनि क्यान्सरको जोखिममा छन्।
विषमुनि विद्यार्थीः मिथिला मन्टेसरी, जनकपुरका विद्यार्थी ।
एस्बेस्टस् क्यान्सर रोगको एक कारक भएको पुष्टि भएपछि सरकारले गत असारदेखि यसको प्रयोग, बिक्री–वितरण र आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, वर्षौंदेखि एस्बेस्टस्को विषालु छानोमुनि गुजारा गरिरहेका मध्ये धेरैलाई असरबारे थाहै छैन। “एस्बेस्टस् प्रयोगले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे अहिलेसम्म जानकारी छैन”, प्रहरी बिट टाँडी रामवनका हवल्दार रामशरण कोइराला भन्छन्।
सन् १९७३ मा इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सर (आईएआरसी) ले घर छाउन प्रयोग गरिने फाइबरयुक्त एस्बेस्टस् खनिज क्यान्सरको एउटा कारक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। एस्बेस्टस्ले मेसोथेलियोमा (एस्बेस्टस्का कारण फोक्सो र आन्द्राको झ्िल्लीमा लाग्ने रोग), फोक्सो, घाँटी, पाठेघरको क्यान्सरसँगै श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्ने संस्थाको निष्कर्ष थियो।
डा. सुनिलकुमार जोशी,
नेपालमा पनि १५ वर्षअघि एस्बेस्टस्कै कारण मेसोथेलियोमा लागेका दुई बिरामी भेटिएका थिए। डा. सुनिलकुमार जोशीले सन् २००१ मा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा गरेको अध्ययनमा विदेशबाट काम गरी फर्केका दुई कामदारमा यो रोग पाइएको थियो। “एस्बेस्टस्को उच्च जोखिममा खानी तथा उद्योगका कामदार छन्”, काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका जोशी भन्छन्, “एस्बेस्टस्को छाना छाउने र प्रयोगकर्ता पनि खतरामुक्त छैनन्।”
प्रहरी पनि जोखिममाः एस्बेस्टस्ले छाएको रामवन, बारास्थित प्रहरी बिट।
बाराजस्तै छिमेकी पर्सामा पनि एस्बेस्टस् छ्याप्छ्याप्ती छ। वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका बजारका विद्यालय र सरकारी कार्यालयका भवन नै एस्बेस्टस्ले छाएको छ। ४५ वर्षअघि चीनले बनाइदिएको नेशनल ट्रेडिङको भवनमा पनि एस्बेस्टस्कै छानो छ। आश्चर्य त के छ भने एस्बेस्टस्को आयात–निर्यातमा रोक लगाएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको छानामा समेत एस्बेस्टस् नै छ। भन्सार प्रमुख सेवन्तक पोखरेल क्यान्सरजन्य रोग निम्त्याउने भएकाले सरकारको निर्देशनपछि एस्बेस्टस्को आयातमा रोक लगाएको बताउँछन्।
धनुषाको हालत पनि फरक छैन। जनकपुरको भानुचोकस्थित मिथिला मन्टेसरीको भवन मात्र होइन, उमेश महराजस्ता जान्नेबुझनेको घरमा एस्बेस्टस् नै देखिन्छ। “एस्बेस्टस्ले क्यान्सर लाग्छ भन्ने कुरा भर्खर थाहा पाएँ, के गर्ने अन्योलमा छु” एक वर्षअघि मात्र छानो छाएका महरा भन्छन्। चितवन, मकवानपुर, रौतहटका राजमार्ग छेउछाउका घर, विद्यालय र सरकारी कार्यालयका भवन जताततै एस्बेस्टस् भेटिन्छ।
वीरगञ्ज, वाइपास भएर एस्बेस्टस् लैजाँदै।
सरकारले आठ महीनाअघि नै एस्बेस्टस्मा प्रतिबन्ध लगाए पनि ५ चैतमा वीरगञ्ज, ब्रह्म चोकस्थित शोभित ट्रेडिङ पुग्दा एस्बेस्टस् बिक्री भइरहेकै थियो। ट्रेडिङबाटै एस्बेस्टस् रिक्सामा लगिंदै थियो। टे्रडिङका सञ्चालक लालबाबु साह चाहिए जति एस्बेस्टस् उपलब्ध गराउन सकिने बताउँदैथिए। “मिटरको ४५० रुपैयाँ पर्छ। बार्गेनिङ्ग गर्न मिल्दैन। जति चाहिए पनि उपलब्ध गराउँछौं”, साहले भने, “चाहिएमा काठमाडौंसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था छ।”
तराईका गाउँका गाउँ एस्बेस्टस्को छानामुनि छन्। टाँडी रामवन, बारा।
सरकारले एस्बेस्टस्युक्त सामग्री आयातमा रोक लगाए पनि पुराना एस्बेस्टस् व्यवस्थापनमा भने चुनौती कायमै छ। किनभने एस्बेस्टस्को छानो जति पुरानो हुन्छ, यसले पुर्‍याउने क्षति उति बढी हुन्छ। डा. सुनिलकुमार जोशी प्रयोग भइसकेका यस्ता सामग्री अझ् हानिकारक हुने भएकाले तत्काल वैज्ञानिक व्यवस्थापन थाल्नुपर्ने बताउँछन्। “यसो नगर्नु सरकारको लापरवाही हो”, उनी भन्छन्।